“Wasiirradu Xisbi bay ka tirsan yihiin, haddii ay meel kale u ololeeyaanna ayay Nusqaan nagu tahay” | Somaliland.Org
“Wasiirradu Xisbi bay ka tirsan yihiin, haddii ay meel kale u ololeeyaanna ayay Nusqaan nagu tahay”
November 17, 2012	“Ururkayaga cidi ma waddo, Ururrada na eedeynayaana waxay ka cabsi qabaan mustaqbalkayaga Ifaya”
“UCID ahaan haddii nalaga badiyo waa nagu khasab inaanu ogolaano”
“Xukuumaddu way kala jeceshahay WADDANI iyo UMMADDA, midna way la dagaalamaysaa, midna…”
Hargeysa (Somaliland.Org)- labada xisbi ee KULMIYE, UCID iyo Labada urur siyaasadeed ee WADDANI iyo UMMADDA, ayaa shalay yeeshay dood kulul oo ay ku faaqideen ololaha doorashadda deegaanka ee 28-ka Bishan dalka ka qabsoomi doonta. Waxaanu urur iyo xisbi kastaaba difaacay siyaasadiisa iyo tayada murashaxiinta ay u soo xuleen doorashadan.
Doodan waxa ka qeyb galay Guddoomiye Ku xigeenka koowaad ee xisbiga KULMIYE Md. Maxamed Kaahin Axmed, Guddoomiye Ku xigeenka sadexaad ee xisbiga UCID Md. Cali Maxamed Yuusuf (Cali-Guray), Afhayeenka Ururka WADDANI Md. Ibraahim Mahdi Buubaa iyo Xoghayaha Guud ee Ururka UMMADDA Md. Naasir Bedel Ismaaciil.
Guddoomiye Ku xigeenka sadexaad ee xisbiga UCID Md. Cali Maxamed Yuusuf (Cali-guray) oo la weydiiyay waxa sababay dhawaaqyo ay kaga sii dar-daar werinayeen natiijadda doorashadda, waxaanu yidhi “Annagu wax gaar ah oo aanu uga qeylin karnaa natiijadda doorashada ma jirto. Waa la tartamaa. Laba kooxood oo kubad wada ciyaarayana lama yidhaahdo haddii lagaa badiyo ma ku qancaysaa badinta ee taasi waxay u taallaa siidhiwalaha iyo garsoorkoodda. Anigu dhica aan ka taagan nahay haddii nalaga badiyo waa bil khasab oo sankaa noo daloola inaanu ogolaano, haddii aanu badinana in naloo hibeeyo waa lagu khasban yahay.”
“Arrinka meesha ku jira ee aanu anagu jecel nahay waxa weeye in axsaabta kii soo baxayaana inuu ku soo baxo si xor iyo xalaal ah. Ka laga badinayaana in lagaga badiyo si xor iyo xalaal ah,”ayuu yidhi Cali Guray oo ka hadlayay dood ay shalay u qabatay Laanta Afsoomaaliga ee VOA-du axsaabta siyaasadda.
Cali Guray waxa uu ku dooday in Xukuumaddu kala jeceshahay asxaabta siyaasadda, waxaanu yidhi “Imika xukuumaddu way kala jeceshahay WADDANI iyo UMMADDA, midna way la dagaalamaysaa, midna Wasiirradii ku jiray xukuumadda ayaa u ololeynaya oo murashaxiintoodii geeyay WADDANI, waana arrin inagu cusub. Waa la arki jiray xukuumad u wada ololeynaysa xisbi qudha laakiin rag xukuumad ku wada jira oo midba ururka uu doono u ololeynaya ayaanu aragnay waxa ka mid Wasiirka Arrimaha gudaha oo kale.”
“Waxaan qirayaa oo kale Ururka UMMADDA xag ILAAHAY oo uu ka baxo mooyaanne’e teello loo dhigan maayo, ”ayuu yidhi Cali Guray.
Guddoomiye Ku xigeenka koowaad ee KULMIYE Md. Maxamed Kaahin Axmed, oo la weydiiyay waxa ka jira in xukuumaddu aanay xisbiga tallada haya uun kuwada jirin, waxa uu yidhi “Horta, Arrintaasi Annaga (KULMIYE) waa nagu meel ka dhac haddii la leeyahay Wasiirradayaddii meelo kale ayay u ololeynayaan. Anagga ayay daciifnimo nagu tahay, Wasiirrada Xukuumadda KULMIYE ka tirsani waxay ku khasban yihiin oo waajib ku ah sharciyan xisbi bay ka tirsan yihiine’ inay xisbigooda u ololeeyaan. Wax gaar ah oo aanu anaggu ururka UMMADDA kula dagaalamaynaana ma jirto. Wax gaar ah oo WADDANI noogaga dhow yahay UMMADDA, UCID iyo ururadda kalena ma jirto. Tartan baa naga dhaxeeya. Anagga KULMIYE ayaa qaadanay in ururradda la furo haddii uu WADDANI na reebi karo wuu na reebayaa. Haddii aanu reebi karnana waanu reebaynaa.”
“Aniga iyo walaalkay kala xisbi baanu noqon karnaa, doorashadii Madaxweynaha ee Daahir Rayaalle iyo Axmed Siilaanyo ku tartamayeen doorashadii ka horeysay ee Baarlamaanka, waxaynu ku haynaa Somaliland min Hargeysa illaa Sanaag laba walaallo ah oo mid KULMIYE yahay, midi UCID yahay, midna UDUB yahay. Faysal Cali Waraabe oo UCID ah waxa ilmaadeeradii ku jireen KULMIYE iyo UDUB. Siilaanyo kuwa ay is xigeenna UDUB iyo UCID-ba way ku jireen,”ayuu yidhi Maxamed Kaahin.
Guddoomiye Ku xigeenka KULMIYE wuxuu hadalkiisa ku ladhay , “Wasiirradu xisbi bay ka tirsan yihiin, Ururrada kale haddii ay deel qaaf ka tirsadaan. Waa inay xisbiga ay ka tirsan yihiin u soo gudbiyaan oo ay yidhaahdaan Wasiirradaasi ururkaasi ayay deel-qaaf sidaasi ka galeen.”
Sidoo kale, Afhayeenka Ururka WADDANI Md.Ibraahim Mahdi Buubaa oo la weydiiyay sida uu u arko eedaha loo soo jeediyo ururkooda ee lagu xidhiidhiyo inay xukuumaddu gacan saar la leedahay oo Wasiirro la ololeeyaan, waxa uu kaga jawaabay “Runtii anigu waxaan arrintaasi u arkaa cabsi ay ka qabaan sida ururka WADDANI u socdo iyo saadaashiisa oo meel wanaagsan maraysa, ayaa sababtay in la yidhaahdo rag Wasiirro ah in Wasiirka Daakhiliga iyo Caafimaadka oo kale lagu eedeeyo inay la socdaan WADDANI. Waxaan aaminsan nahay in Wasiirradaasi ay ka tirsan yihiin xisbul xaakimka oo ay anagga WADDANI ahaan nala dagaalamayaan. Waxaanu aaminsan nahay in Wasiirka Caafimaadka oo kale aanu taageersanayn murashax Indho case oo beeshiisa ka soo jeeda oo WADDANI ka sharaxan. Waxaanu wataa murashax kale oo isla raaskooda ka soo jeeda oo KULMIYE ka sharaxan oo uu si toos ah ololihiisa uga qeyb qaatay.”
“Markaa dadka leh xukuumadda ayaa wadata WADDANI waxaan u arkaa mid fulaynimo Iyo baqasho ururradda kale ka qabaan mustaqbalka ifaya ee WADDANI. Waxaan idiin sheegayaa inaanu jirin cid daba ka riixaysa ururkayaga ee uu yahay urur qaran oo bulshadda Somaliland-na ay iskugu timid oo ay ku wada jiraan,”ayuu yidhi Afhayeenka WADDANI.
Ibraahim Mahdi oo la weydiiyay in ururkoodu aanu dhaliilin xukuumadda, taasina ay sababtay in dawladda loo nisbeeyo, waxa uu yidhi “Horta imika ma nihin xisbi qaran urur siyaasadeed ayaanu nahay. Waxa arrintaasi ka horeysa ururkii ma soo gudbayaa mise ma soo gudbayo. Ninku isagoo doonaya inuu Berbera u dabaal tago haddii isagoo Hargeysa jooga uu shaadhka iyo surwaalka la sii baxo, dee waa ayaan darro. Lama gaadhin xili aanu is xag-xagano oo aanu xukuumaddana dhaliilaheeda badka soo dhigno. Hawshaasi waxa qaban kara Xisbi qaran oo mucaarid ah ayuun baa qaban kara arrintaasi.”
Geesta kalena Xoghayaha Ururka UMMADDA Naasi Bedel Ismaaciil, ayaa ku dooday in laga xidhay illaa sagaal murashax oo ka mid ah murashaxiintooda doorashadda deegaanka, waxaanu yidhi “Xukuumadda KULMIYE aad ayaanu uga cabanaynaa. Mushkiladda ugu weyni waxay tahay waxan nalagu hayaa waxay luminaysaa kalsoonidii aad ku qabi lahayd natiijadda doorashadda. Waxaanu nahay urur siyaasadeed mucaarid ah oo bisil oo sii diyaarsaday qorsheyaashiisii illaa murashaxiiintiisii madaxtooyadda.”
“Anagu waanu ixtiraamaynaa jiritaanka KULMIYE iyo asxsaabta kaleba, hase yeeshee waxaanu ka baqanaynaa sidii UCID ku dhacday in adhaxda nalagu dhufto. Waxaanu leenahay dawladdu ururadda tartamayaa ha u sinaadaan oo ha la wada tartanto,”ayuu yidhi Xoghayuhu.
Maxamed Kaahin Axmed oo ka hadlayay marxaladda xiligan doorashadu marayso wuxuu yidhi “Doorashadu waxay maraysaa meel gabo-gabo ah oo aanu axsaabta isla soo waafaqnay xeerarkii anshaxa ee aanu ku dhaqmaynay. Waxaanu leenahay meel aanu u kala ashatoono oo ah Gudida anshaxa iyo Komishankii doorashadda ee hawlahan hagayay. Anagu waxaanu qabnaa xisbi ahaan inaanay imika in dadka la dawakhiyo. Annaga oo xisbul xaakimkii ah waxaanu u tafo-xaydanay inaanu xeerkii furno oo ururro nala tartamaan. Qolyihii odhan jiray saaxadda siyaasadda waxa xuurto- ku haysta KULMIYE, UDUB iyo UCID, ayaad arkaysaa in damacoodu weynayn waxaad ku arkaysaa waxay fureen 15 urur siyaasadeed. Waxay furi lahaayeen laba ama sadex. Waxa imika siyaasaddii biyo dhiciyay waa ururaddii cusbaa.”
Afhayeenka WADDANI Ibraahim Mahdi Buubaa oo daba socday hadalkii Cali Guray waxa uu ku dooday in ururkoodu yahay mid sal balaadhan oo buuxiyay dhammaan shuruudihii laga doonayay urur siyaasadeed. “Waxaan filayaa in Ururka WADDANI uu yahay mid sal baaladhan oo bulshada Somaliland oo dhami ku jirto. Ma aha in Wasiirka Arrimaha Gudaha oo kale la yidhaahdo iyadoo qabyaalad laga hadlayo WADDANI ayuu u ololeynayaa. Taasi waa nusqaan mana dhici karto waana aanu ka raali gelinaynaa xubnaha la soo hadal qaaday ee la yidhi ururkayaga ayay u ololeynayaan,”ayuu yidhi Ibraahim Mahdi Buubaa, waxaanu tilmaamay inay ku qanci doonaan natiijadda komishanku ka soo saaro doorashadda.
Previous PostGoboladda dalka iyo Jawigii Ololaha Ururka WADDANINext PostTaliyaha Booliska oo soo bandhigay 9 Baabuur oo ay u kala direen Goboladda dalka	Blog